IPhone 13 Pro iyo iPhone 13 Pro Max waxay wadaagaan kamarado isku mid ah | Wararka IPhone
El Qaabka Pro ee baaxadda iPhone -ka ayaa u dhashay in hal talaabo hore loogu sii qaado taleefanka casriga ah ee Apple. Dhismaha saddexda qol ayaa calaamadiyay farqiga u dhexeeya tusaalaha caadiga ah iyo qaabkan cusub ee gaadhay warshadaha maqalka maqalka. Si kastaba ha noqotee, illaa iPhone 12 Pro iyo Pro Max Apple ayaa sidoo kale calaamadiyay kala duwanaansho u dhexeeya hal moodel iyo mid kale, gaar ahaan kan xasiliyaha indhaha oo leh wareejin shidma. In kasta oo Pro Max uu lahaa, Pro wuxuu dejiyay xasilinta indhaha laba -geesoodka ah. Iyadoo imaanshaha iPhone 13 Pro iyo iPhone 13 Pro Max farqigaasi wuu baaba’aa oo labada qalabba waxay wataan kaamirooyin isku mid ah oo leh tilmaamo isku mid ah.
Kaamirooyin isku mid ah iyo astaamo isku mid ah oo loogu talagalay iPhone 13 Pro iyo Pro Max
Nidaamkayaga kamaradaha Pro wuxuu kor u qaaday baarka sidii hore oo kale. Iyada oo leh qalab casri ah oo awood u leh qabashada faahfaahinta cajiibka ah. Software caqli badan oo ku siinaya sawirro cusub iyo farsamooyin fiidyow. Iyo jibbo si aan caqli gal ahayn u soomi karta oo ka hor imaanaysa xadka waxa suurtogalka ah. Waa inaad aragtaa sawirradaada si aad u rumaysato.
IPhone 13 Pro iyo 13 Pro Max waxay dhabarka ku haystaan ​​kakan saddex kamaradood oo aad u kala soocaya baaxadda Pro. telephoto, xagal ballaadhan iyo xagal aad u ballaaran taasi waxay kuu oggolaaneysaa inaad sawirro ka qaaddo oo aad duubto muuqaallo leh xirfad -yaqaannimo guud. Intaa waxaa dheer, Apple wuxuu mas'uul ka ahaa soo bandhigida horumarin weyn oo xirfadeed sida suurtagalnimada duubista ProRes ama hagaajinta dhammaan dareemayaasha saddexda kamaradood si loo hagaajiyo Habka Habeenkii ama loo oggolaado inuu galo adduunka sawir -qaadista macro.
Illaa markii la bilaabay iPhones-kii ugu dambeeyay, Apple had iyo jeer waxay samaysay farqiga u dhexeeya labadiisa moodel ee Pro. Marka lagu daro baaxadda shaashadeeda, iPhone 12 Pro Max wuxuu isku daray x2,5 zoom optical-ku dhow, x5 zoom optical iyo a zoom digital ah ilaa x12. Tani waxay kaga duwan tahay walaalkeed iPhone 12 Pro. Laakiin sidoo kale, Waxay ku kala duwanaayeen jiritaanka sawir -qaade sawir -qaade ah oo u beddelaya dareeraha, gaar u ah Pro Max.
Si kastaba ha ahaatee, farqigaani wuxuu ku baaba'aa iPhone 13 Pro iyo 13 Pro Max y labada noocba Waxay wataan isla saddex kamaradood oo leh tilmaamo farsamo oo isku mid ah:
77mm dhererka focal
Muuqaalka indhaha x3
Ƒ / 2,8 furitaanka
Lix muraayadaha curiyaha
13mm dhererka focal
Ƒ / 1,8 furitaanka
Dareere degdeg ah
26mm dhererka focal
1,9 pixelsm pixels
Ƒ / 1,5 furitaanka
100% Pixels Focus
Todoba muraayad curiye
Xasilinta Sawirka Aragga ee Shift Sensor
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 13 » IPhone 13 Pro iyo iPhone 13 Pro Max waxay wadaagaan kamarado isku mid ah